डा बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ शक्ति पुर्व अभियान्ताको खुल्लापत्र – Everest Dainik – News from Nepal
डा बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ शक्ति पुर्व अभियान्ताको खुल्लापत्र
नेतृत्वको आलोचना गर्न सहज कि नेतृत्व गर्न नेता ज्यू ?
भदौ २९ । आदरणीय नेता बाबुराम, हामीले गर्ने आलोचनालार्इ गाली नसम्झनुहोला, हामीले जति गाली गरेपनि तपाईको कुभलो चिताएर गरेको पक्कै होइन, हामीलार्इ जति तपार्इको माया अहिले अवसर खोज्दै तपाइको गुणगान गाउने हरेक राम्रा या नराम्रा काम गर्ने उक्साउने र आफूलार्इ तपार्इको खास मान्छे भन्न रुचाउनेहरुलार्इ पक्कै छैन । छिमेकीले गर्ने मायाभन्दा आमाको कुटार्इमा बढी माया हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोला । अनि सचेत ती सँग रहनुस् जसले तपाईले विष ल्याएर यो अमृत हो भन्दा नि तपार्इलार्इ उक्साउन होहो भन्दै ताली पिट्छन । तपार्इ जहाँ जुन अवस्था र जुन बाटोमा हिडेपनि तपार्इको राजनीतिक इतिहास माओवादी आन्दोलन दश वर्षे महान जनयुद्ध हजारौको बलिदानी त्याग र तपस्यासँग नै जोडिएको छ । जुन कुरा तपाईं देखावटी रुपमा नस्वीकारे पनि अन्तर आत्माले स्विकार गर्न बाध्य बनाउँछ ।
तपाँइ संघीयता गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता, संविधानसभाबाट संविधान जस्ता परिवर्तनको संवाहकमध्ये एक हुनुहुन्छ, हिजो तपार्इहरुकै उत्प्रेरणामा आफ्नो सारा खुशी र ब्यक्तिगत स्वार्थलाइ त्यागेर तपाइहरुकै अभियान (जनयुद्ध) मा लामबद्ध भई सहादत प्राप्त गर्ने अमर शहिदहरुको आत्माले तपार्इहरु टुटेको फुटेको स्विकार गर्न सक्दैनन, हिजो त्यही अभियानमा लामबद्ध भई सेनाको गोली लागि घाइते भएकाहरुको चाहना पनि तपाइहरुको बाटो फरक होस् भन्ने पक्कै छैन । त्यसैले प्रिय नेता ज्यू एकपल्ट गम्भीर भएर सोच्नुस त ? फुटेर वैद्यले के गर्न सके ? बिप्लवले के गरे ? अनि नयाँ शक्तिले अहिलेसम्म के गर्यो ? फाइदा के त फुटेर ? त्यसैले आउनुस् ध्रुवीकरण अभियानमा जोडिनुस् आफ्नै पुरानै इतिहाससँग सकेसँगै अघि बढौला नसकेसँगै पछि हटौला ।
संविधान निर्माण लगत्तै माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धबिच्छेद गरेर तपाईं बाहिरिनुभयो । त्यतिबेला तपार्इले माओवादी केन्द्रमाथि केही आरोप सहितको टिप्पणीहरु गर्नुभएको थियो । पार्टीबाट बाहिरिएपछि तपार्इले ती आरोपहरुलार्इ प्रमाणित गर्न सक्नुभयो कि भएन समीक्षा गर्नुस् । तपार्इले प्रतिपादन गरेको ५ स मध्ये कुन स को अर्थलाइ व्यवहारिकरुपमा पालना गरेको छ ? अर्थात नयाँ शक्ति पार्टीभित्र नै त्यसको व्यवहारिक प्रयोग हुन र गराई तपार्इको कमजोरी हो कि होइन आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ कि ?
हिजो तपार्इले माओवादी पार्टी छाडेकै दिन अर्थात २०७२ असोज ९ गते नै आफू आबद्ध रहेको जनप्रगतिशील मञ्च छाडेर तपार्इको समर्थनमा लागेको व्यक्ति हु म । म त्यसै तपाइको पछि लागेको थिइन ? मैले आफू आबद्ध संगठन छाडेको थिइन । थिए त केबल तपार्इले देखाएको सपनाको पछि लागेको थिए । आर्थिक विकास समृद्धि, बेरोजगारी अन्त्य, समतामुलक समाज निर्माण सुशासन जस्ता सपनाहरु देखाएको थियो । त्यसैले पछि लागेका थियौ म र म जस्ता हजारौ ब्यक्ति हरु । तपाईले एक्लै पार्टी छाडेर निस्कदाँ पनि तपाइप्रतिको आशा भरोसाले तपार्र्इले पछि लाग्नेहरु धेरै थिए । अरुको त कुरै छाडौ तपार्इसँगै ३७ बर्ष राजनीतिक सहयात्री भएर हिँडेका देबेन्द्र पौडेल क.सुनिलले तपाइसँगको साथ कुनै लहडमा छाडेका होलान् ? कुनै लोभ र प्रलोभनमा परेर तपाईसँगको यात्रामा पुर्णविराम लगाएका होलान ? कदापी होइनन् । तपाँइ प्रधानमन्त्री हुँदा तपाँइको आर्थिक सल्लाहकार बनेर तपार्इको कामबाट प्रभावित भएर तपाँइसँगै नयाँ शक्ति बनाउन हिडेका रामेश्वर खनाल के त्यसै हिडेका होलान त ? अरुले साथ छाडेर हिड्दा त्यसलाइ अनेक आरोप लगाएर गाली गरेर त्यसको खोइरो खन्न भन्दा बरु किन दिनानुदिन मप्रतिको बिस्वास धेरैमा गुमिरहेको भनेर सोच्ने हो कि ?
डाक्टर साब माओवादीभित्र रहँदा तपार्इलार्इ काम गर्ने अवसर दिइएन अरुको अन्डरमा रहँदा आफु अनुकूल आफ्नो योजना मुताबिक काम गर्नै नपाउनु भएकै होला भन्ने हामीलार्इ पनि लागेको थियो । त्यसैले अब त तपार्इबाट केही हुन्छ तपार्इको नेतृत्वले केही गर्न सक्छ तपाइसँग जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने क्षमता छ भन्ने आशाले नै हामी तपाइको पछि लागेका हौ । तर करिब १८ महिना सम्म हेर्दा ति आशा सबै निराशामा परिणत भयो । आखिर आफ्नो शुभचिन्तक त्यो अवस्थामा पुग्ने परिस्थिती कसरी निर्मान भयो गम्भिर भएर सोच्ने हो कि ? आजकल त तपार्इलार्इ आफैले सिकाएको मार्क्सबाद, लेनिनबाद, माओबाद मिथ्या लाग्न थालेका छन है ? हिजोका सहयात्रीहरु सबैभन्दा नजिकका शत्रु जस्ता लाग्छन है ? त्यसैले त होला घरी घरी खाओबादी भन्दै हिड्नुहुन्छ, अनि इतिहास सस्कृती रीतिरिवाज परम्पराको खिल्ली उडाउँदै टोपी दिवसलार्इ अनेक ब्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ । के हामीले तपाइबाट गरेको अपेक्षा त्यही थियो त ?
अन्त्यमा हामी तपाँइको शुभचिन्तक हौ, शत्रु हैनौ, जबसम्म तपार्इबाट केही आशा थियो केही गर्नुहुन्छ भन्ने थियो तबसम्म तपाइको पछि लागेकै हो । तर जब आशा टुट्यो तबसँगै बस्न सकिएन । जता भएपनि तपार्इको भलो नै चिताउँछौ तपाईं जस्तो ब्यक्तिको क्षमता ओइलिएर गएको भन्दा फस्टाएको नै देख्ने हाम्रो पनि रहर छ । तपाईं प्राबिधिक र वौद्धिकरुपमा पनि दक्ष हुदाँहुदै पनि उचित र नेतृत्वदायी राजनीतिक भुमिकामा सक्षम हुनुहुदो रहेनछ भन्ने तपाईं आफैले प्रमाणित गरिदिनुभयो । नेतृत्वको आलोचना गर्न जति सहज हुन्छ नेतृत्व गर्न त्यो भन्दा हजार गुणा कठिन हुन्छ भन्ने कुरा अब त राम्रोसँग बुझ्नुभो कि ?
नवराज सिंखडा ‘जिज्ञासु’
नयाँ शक्ति, कतार